जान्नुहोस् : यी महिला !जसले आफ्नै पिसाब दिनमा पाँच गिलास पिउँछिन् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
जान्नुहोस् : यी महिला !जसले आफ्नै पिसाब दिनमा पाँच गिलास पिउँछिन् !
८ मंसिर २०७८, बुधबार ००:००
आफ्नो प्यास शान्त र शरीरलाई हाइड्रेट राख्नका लागि मानिसहरु विभिनन प्रकारका पेय पदार्थ पिउन रुचाउँछन् । हामीले खाएको तलर पदार्थ हाम्रो शरीरबाट पिसाव हुँदै बाहिरीन्छ । हामी सबैलाई पिसाब देख्दा घिन लाग्ने गर्छ तर तपाईंले कहिल्यै मानिसले आफ्नै पिसाब पिएको देख्नुभएको छ? ५३ वर्षकी एक महिलाले उनलाई आफ्नो पिसाब पिउने बानी परेको र यसको स्वाद उनलाई कुनै स्याम्पेनजस्तो लाग्ने बताएकी छिन् । महिलाले पछिल्लो चार वर्षदेखि यस्तो गरिरहेकी छिन र उनलाई पानी पिउनुभन्दा पिसाब पिउन सजिलो लाग्ने बताएकी छिन् ।
द सनका अनुसार​क्यारी नामकी यी महिला कोलोराडोमा बस्छिन् । महिलाको दाबी अनुसार उनी दिनमा करिब पाँच गिलास आफ्नै पिसाब पिउँछिन् र उनी पछिल्लो चार वर्षदेखि यस्तो गरिरहेकी छिन् ।
यो हिसाबले हेर्ने हो भने महिलाको शरीरमा अहिलेसम्म करिब ३,४०६ लिटर पिसाब गइसकेको छ । टीएलसीको ‘माई स्ट्रेन्ज एक्डिक्सन’ मा महिलाले उनलाई मनतातो पिसाब पिउन मन पर्ने बताइन् र यसले उनलाई शान्ति प्रदान गर्ने बताएकी छिन् ।
क्यारीले भनिन्, ‘पिसाबको गन्ध मेरो खानामा निर्भर हुन्छ । यसको स्वाद पछिल्लो चार वर्षमा मेरा लागि निकै परिवर्तन भएको छ । थुप्रै पटक यो नुनिलो हुन्छ र कतिपटक मलाई यो स्याम्पेनजस्तो लाग्छ । तपाईं शरीरबाट निस्कने थुप्रै कुराको स्वाद चाख्न सक्नुहुन्छ । यस्ता धेरै कुरा छन् जुन मलाई मनपर्दैन किनभने यी स्वादिला हुँदैनन् ।’
महिलाले थपिन्, ‘मलाई कुरिलोलगायतका खानेकुरा निकै मनपर्छन् । तर म अब यो खादिनँ किनभने यसले पिसाबको स्वादलाई बिगारिदिन्छ । ’ चार वर्षअघि आफूलाई मेलानोमा क्यान्सर भएको थाहा भएपछि केमोथेरापी गर्नुको साटो पिसाब पिउन सुरु गरेको बताइन् । मेलानोमा क्यान्सर एक प्रकारको छालाको क्यान्सर हो ।
त्यसपछि क्यारीको जीवनमा पिसाबको प्रयोग बढ्दै गयो । उनले पानी पिउन जारी राखिन् र आफ्नो हेरविचारका लागि विभिन्न तरिकाको उपयोग पनि गरिन् । क्यारीले भनिन्, ‘म टुथपेस्टको साटो पनि यसको प्रयोग गर्छु । यसले मेरो दाँतलाई भित्रैदेखि चम्काउँछ । ’ क्यारी आफ्नो आँखा–कानमा यसको थोपा पनि हाल्छिन् र यसलाई कपालको जरामा पनि लगाउँछिन् ।
क्यारीका अनुसार उनी नुहाउने बेला उनको बासी पिसाबले एक उत्कृष्ट लोसनको रुपमा काम गर्छ । यद्यपि, क्यारीकी छोरी केसी आफ्नी आमाको स्वास्थ्यको विषयमा अत्यधिक चिन्तित छिन् । केसी भन्छिन्, ‘के यस्तो गर्नु साँच्चै नै मेरी आमाको स्वास्थ्यका लागि राम्रो छ रु मलाई यो कुराले असाध्यै चिन्तामा पार्ने गर्छ ।’
आफ्नी छोरीको कुरा सुनेर क्यारी डाक्टरलाई भेट्न सहमत पनि भइन् । उनले क्यारीको कम्मरमा भएको एउटा कोठीको विषयमा पनि आफ्नो चिन्त व्यक्त गरिन् । त्यसपछि डाक्टरले उनलाई तुरुन्त बायोप्सी गराउन सुझाए । तर क्यारीले पारम्परिक चिकित्सा पद्धतिलाई त्याग्न अस्वीकार गरिन् । क्यारीका अनुसार यो विषयमा उनले जति पनि अध्ययन गरिन्, त्यसअनुसार यदि उनले पिसाब थेरेपी त्यागेको खण्डमा उनको मृत्यु हुनेछ । स्रोत : रातोपाटी
प्रकाशित मिति: Nov 24, 2021
इजरायलमा फेला पर्यो २१ सय वर्ष पुरानो हेलेनेस्टिक फार्म !
इजरायलका पुरातत्वविद्हरुले करिब २१ सय ५० वर्ष पुरानो हेलेनिस्टिक फार्म फेला पारेका छन्। उनीहरुले इजरायलको
संसारका यस्ता अनौठा विवाह : जहाँ दुलहा-दुलही कतै १ वर्षका लागि कोठामा बन्द गरीन्छ !
विवाह एक सामाजिक परम्परा हो । हाम्रो समाजमा विवाह सम्वन्धी मूल्यमान्यता समाज अनुसार फरक फरक
एकैपटक यी युवकले गरे ९ महिलासँग विवाह, यस्तो कारण !
सामान्यतया विवाह भनेको एक केटी र एक केटाबीच हुने पवित्र सामाजिक परम्परा हो भनेर भन्ने
जब स्टेजमा प्रशंसकलाई बोलाएर गाइकाले मुखमा पिसाब गरिदिएपछि…!
अमेरिकाकी एक चर्चित गायिकाले लाभइ कन्सर्टका बेला आफ्ना एक प्रशंसकमाथि जे गरिन् त्यसले बबाल निम्तिएको
कसरी भए यी वृद्ध व्यक्तिका १३ सय सन्तान जान्नुहोस् कारण !
यो संसारमा कति कुरा हामिलाई सुन्दा अनौठो लाग्छ तर यर्थाथ घटना रहेको हुन्छ । मानिसका
पेरुमा भेटियो प्राचीन समयको सामूहिक चिहान !
पेरुको च्यान च्यान सहरमा पुरातत्वविद्हरुले प्राचीन समयको सामूहिक चिहान फेला पारेका छन्। उनीहरुले प्राचीन चिमु